चर्चित अभिनेत्री तथा अभिनेता अनुपम खेरकी पत्नी किरण खेरलाई लाग्यो घा’ तक रोग
Homeसमाचारचर्चित अभिनेत्री तथा अभिनेता अनुपम खेरकी पत्नी किरण खेरलाई लाग्यो घा’ तक रोग
April 1, 2021 admin समाचार 7130
भारतीय जनता पा’र्टीकी सांसद तथा बलिउड अभिनेत्री किरण खेरलाई ब्लड क्यान्सर क्या’न्सर भएको छ । भारतिय मिडि’याका अनुसार खेरलाई मल्टिपल साइलोमा भएको खुलासा भएको छ । उनको अहिले उपचार भइरहेको समाचारमा जना’इएको छ ।
किरण २०२० देखि नै यो समस्या’को उपचार गराइरहेकी छिन् । किरण खेर बलिउड अभिनेता अनुपम खेरकी पत्नी हुन् । भाजपा चण्डीगढका सद’स्य अरुण सूदले विशेष पत्रकार सम्मे’लन गरेर किरणको स्वास्थ्यबारे जानकारी गराएका हुन् । नोभेम्बर ११ मा चण्डीगढको घरमा हुँदा फ्र्या’क्चर भएको थियो ।
भाज’पाका चन्डीगढ अध्यक्ष अरुण सुदले मिडियासँग कुरा गर्दै यो कुराको जानकारी दिएका हुन् । किर’णलाई ब्लड क्यान्सर भएको गतबर्षको नोभेम्बरमा पत्ता लागेको थियो । अरुणले मिडियासँग भने–‘गतबर्षको नोभेम्बर ११ ता’रिखमा किरणको हात घरमै भाच्चिएको थियो ।
उनले, चन्डी’गढको एक अस्पतालमा उपचार गराएकी थिइन् । सोही समयमा उनीलाई मल्टिपल मायलो’मा नामक रोग रहेको पत्ता लागेको थियो । उनको दायाँ हातदेखि बायाँ हातसम्म यो रोग फैलिएको छ । ४ डिसे’म्बरमा उनलाई मुम्बई ल्याइएको थियो । उनी, निरन्तर कोकिलाबेन अस्पतालमा उपचार गराइर’हेकी छिन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस्: बलिउड अभि’नेता अक्षय कुमारले आफ्नो पहिलो प्रेमिकासँगको ‘डेट’ बारे खुलेर बताएका छन्। आफू स्कुल छँदा जो केटीसँग अक्षय डेटमा गए’का थिए, उनैबाट रिजेक्ट भएको अक्षयले ‘कपिल शर्मा शो’ मा बताएका हुन्।
उनी हास्य’प्रधान कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो‘को पछिल्लो श्रृंखलामा फिल्म ‘हाउसफूल ४’को टोली अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। त्यसैबेला अक्षयले आफ्नो बाल्य’कालीन प्रेम कथा सुनाएका हुन्।
का’र्यक्रममा प्रस्तोता कपिल शर्माले अक्षयलाई ‘कुनै केटीले रिजेक्ट गरेको थिइन् कि?’ भन्दै प्रश्न गरे। सो प्रश्न’को उत्तरमा अक्षयलाई आफ्नो पहिलो डेटकी केटीले गरेको रिजेक्टबारे भन्न भन्दै अभिनेता रितेश देशमुखले उ’क्साए।
त्यस’पछि अक्षयले भने, ‘कुरा के हो भने, म त्योबेला निकै लजालु स्वाभावको थिएँ। मैले उनको काँधमा समेत कहिल्यै हात राखिनँ। न त कहिले हात समाएँ। उनी मैले हात समा’तोस्, चुम्बन गरोस् भन्ने चाहन्थिन् क्यारे! तर मैले कहि’ल्यै त्यस्तो गरिनँ। त्यही भएर उनले मलाई छोडेर गइन्।’
‘झन्डै ४ पटक’को भेट थियो त्यो। हामी सुरुसुरुमा सँगै फिल्म हेर्न जान्थ्यौं। रेष्टुरेन्टमा खाना खान जान्थ्यौं,’ उनले थप भनेका छन्। त्यो घटनापछि आफ्नो प्रेम जीवनमा ‘यू-टर्न’ आएको अ’क्षयले बताए।
अक्षयले यति भन्ने बित्तिकै रितेशले हाँस्दै ‘यो कथा’मा कसले विश्वास गरोस् र!’ भन्दै जिस्काए। ‘यो घटना तिमीलाई पहिल्यै भनेको होइन?,’ अक्ष’यले लगत्तै जवाफ फर्काए। त्यसपछि सबैजना गललल हाँस्न थाले।
अक्षय विगत दुई दश’कदेखि अभिनेत्री ट्विंकल खन्नासँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएका छन्। गत आइतबार उनले ट्विं’कलसँग २० औं विवाह ‘एनिभर्सरी’ मनाएका छन्। बलिउड अभिनेत्री ट्विंकलले फिल्म खेल्न छाडे पनि लेखक र निर्माताका रूपमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसकेकी छन्।
अक्ष’यको हालै हरर-कमेडी फिल्म ‘लक्ष्मी’ सार्वजनिक भएको छ। यो उनको पहिलो डिजिटल डेब्यू हो। डिज्नी प्लस हटस्टारबाट रिलिज भएको यो फिल्मले पहिलेको भ्यु’अरसिप रेकर्ड तोडेको छ।
अक्षय अ’भिनित फिल्म ‘सूर्यवंशी’, ‘बच्चन पाण्डे’, ‘पृथ्वीराज’, ‘अतरंगी’, ‘बेलबटम’, ‘रक्षा बन्धन’ र ‘राम सेतु’को काम भइरहेको छ। अक्षय यतिबेला अयोध्या’मा राम मन्दिर बनाउन सहयोग जुटाउने अभियान पनि ला’गेका छन्। इताजा खबरबाट
चियावालीलाई भा’इरल बनाउने प्लानिङ थियो ? विवादपछी गजेन्द्रले खो’ले सबै कुरा (भिडियो सहित)
अमृत सापकोटा र उनकी श्रीमतीबीच चल्यो रूहाउने दोहोरी (भिडियो हे’र्नुहोस)
नारायण काजी श्रेष्ठले थर्काएपछि धमलाले फर्काए जवाफ, धमलाको आखामा आशु (भिडियो हेर्नु’होस)
February 11, 2021 admin समाचार 7485
नेकपा (प्रचण्ड- नेपाल) समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार ऋषि धमलालाई चु’प लाग्न आग्र’ह गरेका छन्। बुधबार राजधानीमा गरेको शक्ति प्रदर्शन सभामा सम्बो’धनका क्रममा श्रेष्ठले आफूहरूले सभा आयोजना गरेको भन्दै धमलालाई अर्को कार्य’क्रम नगर्न आग्रह गरेका
साम्राज्ञी र पुष्प अभिनित फिल्म ‘मारुनी’ युट्युवमा सार्वजनिक (भिडियो सहित)
March 12, 2021 admin समाचार 6544
काठमाडौं-फिल्म ‘मारुनी’ युट्युव मार्फत सार्व’जनिक भएको छ । महाशिवरात्रिको अव’सर पारेर फिल्म युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्ममा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पुष्प खड्काको अ’भिनय रहेको छ । फिल्मले सार्वज’निक प्रदर्शनमा भने औसत व्यवसाय गर्न
जान्नुहोस् कुन अंगमा सुन लगाउँदा कति अ’शुभ, भुलेर पनि न’लगाउनुस् देब्रे अंगमा सुन
April 30, 2021 admin समाचार 5732
मानिसहरु सुनलाई वि’भिन्न गहना बनाएर लगाउने गर्छन् । सुन मात्र होइन चादिँ तथा अन्य वि’भिन्न धातुको प्रयोग गरि गहना लगाउने गरिन्छ । मानिस’हरु सुन लगाउन निकै सौखिन हुन्छन् । पुरुष भन्दा बढि महिलाले सुनको प्रयोग
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243689)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231247)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230977)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229286)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229210)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228224)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228100)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227610)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195572)